Ndị London gbochiri COVID wee mee ezumike ná mba ọzọ karịa ndị Britain ndị ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ndị London gbochiri COVID wee mee ezumike ná mba ọzọ karịa ndị Britain ndị ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • nzukọ • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
O yikarịrị ka ndị London ga-ewepụ nchegbu na ileghara ndụmọdụ gbasara ime njem n'oge ọrịa a anya.
Ndị London egosila na ha adịchaghị njikere karịa ndị si ebe ọ bụla na UK ịhapụ ezumike mba ofesi kwa afọ n'oge ọrịa - ọbụlagodi na nke ahụ pụtara imegide ndụmọdụ gọọmentị, ịkwụ ụgwọ maka ule njem Covid na ịgba chaa chaa na usoro ọkụ okporo ụzọ - dị ka maka nyocha ewepụtara taa (Monday 1 Nọvemba) site na WTM London.
Anọ n'ime 10 (41%) nke ndị London ewerela ezumike esenidụt n'afọ gara aga, okpukpu abụọ nke mba nke 21%, yana ihe karịrị okpukpu atọ karịa ndị nọ na North East, mpaghara UK nke hụrụ ọnụ ọgụgụ kasị ala nke ezumike esenidụt. ewepụtara n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga.
Naanị 13% nke ndị bi na North East mere ezumike esenidụt n'oge ahụ, na-ekpughe Industry Report Report, nke gbara 1,000 UK ahịa.
Ugboro abụọ ka ọtụtụ ndị London karịa nkezi mba debere BOTH ezumike esenidụt na ebe ịnọ, ebe 9% ndị mmadụ nọ n'isi obodo na-ede akwụkwọ abụọ ahụ, ma e jiri ya tụnyere nkezi mba nke 4%.
Naanị 36% nke ndị London agbapụghị ezumike n'afọ gara aga - ma ọ bụ na ọnụnọ ma ọ bụ njem esenidụt - ma e jiri ya tụnyere 51% nke nkezi mba.
Ọ dị ka nnwale nke Covid ewepụghị ndị London na-agbanwe agbanwe, mgbanwe ọkụ okporo ụzọ na ọbụna arịrịọ sitere n'aka gọọmentị na ndị ọkachamara na-adụ ndị Briten ọdụ ugboro ugboro ka ha ghara ịga mba ọzọ - ọbụlagodi mgbe e belatara mmachi njem na ọ bụ iwu maka ezumike mba ofesi.
Enweghị ọpụpụ mpaghara n'ọdụ ụgbọ elu na-abụghị isi obodo nwekwara ike bụrụ ihe kpatara ọtụtụ ndị London karịa nke mba ahụ ji ezumike mba ofesi n'ime ọnwa 12 gara aga.
Na mgbakwunye, mkpọchi mpaghara na-eme ka ụfọdụ ndị njem gaa ọdụ ụgbọ elu mpaghara dị na, ma ọ bụ nwee ike itinye, ọkwa dị iche.
Onye isi ihe ngosi WTM London Simon Press kwuru, sị: “Nnyocha anyị na-egosi na ndị London nwere ike ịhapụ nchegbu na ileghara ndụmọdụ gbasara ime njem n'oge ọrịa a anya.
“Mpụpụ mpaghara ole na ole na mkpọchi mpaghara ọzọ pụtakwara na ndị na-abụghị London enwebeghị ike ma ọ bụ dị njikere ife efe.
“Ọbụna mgbe a kwere ka njem, enwere nrụgide sitere n'aka ndị ozi gọọmentị na ndị ndụmọdụ ahụike ka ha ghara ime njem.
"Nke ahụ, yana mgbagwoju anya na ọnụ ahịa nke ule Covid na mgbanwe na-agbanwe mgbe niile nke ụkpụrụ ọkụ okporo ụzọ, mere ka ọtụtụ ndị kwụsị njem, mana ọ dị ka ndị London kpebisiri ike karịa ọtụtụ ndị ịnweta ezumike mba ofesi mgbe niile - n'agbanyeghị ihe ndị ọzọ. ego ma ọ bụ nsogbu."